पार्टी प्राइभेट लिमिटेड
पार्टी प्राइभेट लिमिटेड जगत नेपाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीतिले कुन बाटो लिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन । संसद् पुनःस्थापना हुन्छ हुँदैन ? संविधान रहन्छ रहँदैन ? चुनाव हुन्छ हुँदैन ? यी र यस्तै बहस जारी छ ।
कोरोना कहरका कारण झन्डै १० महिना घरमा थुनिएको म केही दिनका लागि बर्दियामा छु । गृह जिल्ला, आफन्त र प्रियजनसँगको भेटले बाल्यकालको झल्को दिँदै छ । ऊबेला र अहिलेमा यतिमात्र फरक छ- विकासका दृष्टिले बाटो, घाटो, नहर, स्कुल अस्पताल बढेका छन् । जनताको जीवनस्तरमा भने खासै परिवर्तन छैन । ऊबेला र अहिले पनि मानिसले सोध्ने प्रश्न भने एउटै छ- देश कता जाँदैछ ? मुलुकको राजनीति के होला ?
माघी मनाउन र आफन्तजनसँग भेट्न आएको मलाई केही दिन भए पनि सहरिया जीवन भुल्ने मन छ । तर, साथीभाइ र आफन्तका यस्ता जिज्ञासाले गाउँको रमाइलोमा भुल्न दिइरहेको छैन । काठमाडौंबाट गृहनगर आउँदा पुराना मानिस भेट्ने र उनीहरुका अनुभव सुन्ने अनि रमाइलो गर्ने योजना थियो । तर, गाउँ पुग्दा राजनीतिमा मौलाउदै गरेको विकृति विसंगतिका कुरा सुन्दासुन्दै कान थाकिसके ।
एक जना राजनीतिक कार्यकर्ताले सुनाए- के गर्ने तीन दशक भयो, राजनीतिमा लागेको । अहिलेसम्म कुनै पद पाएको हैन । पार्टीको झोला बोक्दैमा जीवन गयो । न पैसा कमाउन सकियो । नत परिवारको व्यवस्थापन गर्न नै ! हेर्दाहेर्दै राजनीति कति विकृत भयो भने अब यसमा हामीजस्ताको कुनै स्थान नै रहेन ।
केही दिन यता पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालगन्ज विमानस्थलमा दुवै नेकपा र नेपाली कांग्रेसका नेताहरु धमाधम उत्रिरहेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न जिल्ला स्तरीय नेताहरुबीच होडबाजी छ । विमानस्थलको दृश्य हेर्दा कुनै समय भारतीय सीमा क्षेत्रका बस र ट्याक्सी चालकले यात्रु तानातान गरेजस्तो लाग्छ ।
नेपालगन्जमा मेरा एक मित्र भन्दै थिए- पार्टीका नेताहरु विमानस्थलमा ओर्लिन पाएका हुँदैनन्, उनीहरुलाई महँगा होटेलमा राख्न स्थानीय नेता, व्यापारी र पहुँचवालाहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । मानौं, नेताबजारमा सामानको मोलतोल चलिरहेको छ । सुविधा सम्पन्न महँगो होटलमा राख्ने, मीठो खुवाउने र महँगो रक्सी टक्रयाउनेहरु नै नेताको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् । उनीहरू नेतृत्वमा पहुँच बढाएर राजनीतिलाई कमाउधन्दा बनाइरहेका छन् ।
राजनीतिक पहुँचका बलमा ठेक्कापट्टा हात पार्ने, व्यापार व्यवसाय बढाउने अवसर नेताका आसेपासेले पाएका छन् । जनसाधारण भन्छन्- गाउँमा तिनै नवधनाढ्य र सम्पन्न बनेका छन् जो नेताको नजिक छन् । बाँकीले त काम गर्छु भन्दा पनि पाउँदैनन् ।
गाउँतिर योग्यता, क्षमता र राजनीतिक योगदान भएका तर पैसा नहुनेहरूका लागि नेतृत्वमा पुग्ने कल्पना असम्भव प्रायः बन्दै गएको अनुभव धेरैले सुनाए । उनीहरुको भनाइमा यस्ता कार्यकर्ताले राजनीतिक लाभ पाउन मुस्किल त छ नै नेताको दर्शन पाउन पनि कठिन हुन्छ ।
हुर्र उडेर आएका प्राय:जसो नेता रातभर रक्सी पिउँछन्, बिहान ढिलो गरी उठ्छन्, निर्धारित कार्यक्रममा भाषण ठोकेर तुरुन्तै जहाजमा उडिहाल्छन् । घरबाट हिँडेपछि प्रायः कसैले आफ्नो एक पैसा खर्च गर्नुपर्दैन । जिल्ला, क्षेत्र र गाउँ तहसम्मै उनीहरुका आफ्ना खास कार्यकर्ता (एजेन्ट) छन् । नेताका भ्रमणको खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तिनैको हुन्छ ।
यातायातको सुविधाका कारण दल र नेताहरुको संस्कार फेरिएको छ । पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरूमार्फत प्रजातन्त्रको दियो बालेका नेताहरु भन्ने गर्छन्- त्यो बेला आजजस्तो होटलको चलनै थिएन । नत मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा सहजै जहाज र मोटरबाट पुग्न सम्भव थियो । आफ्नै देशको भूगोल टेक्नसमेत भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्थ्यो । राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित थिए । नेताहरुले प्रहरी प्रशासनको आँखा छलेर कार्यकर्ता भेट्नुपर्थ्यो । नेता भेट्ने कार्यकर्ताले मानसिक रुपमा जेल बस्न तयार हुनुपर्थ्यो ।
संगठन गर्न नेताहरु कार्यकर्ताका घरमा महिनौ बस्थे ।
हिजो आजजस्तो राजनीति कमाउने धन्दा बनिसकेको थिएन । नत कुनै राजनीतिकर्मीले कुनै दिन सत्तामा पुगिन्छ भन्ने कल्पाना गरेको थिए होलान् ! राजनीतिमा सेवा भाव थियो । नेता संस्कारले बाँधिएका थिए ।
प्रजातन्त्रको लडाइँमा अघिल्लो पुस्ताले जेल, नेल र बलिदान दियो । अहिलेको पुस्ता त्यसैको ब्याज खाइरहेको छ । तर, आजका नेताले थाहा पाउनुपर्छ तिनका अग्रजले प्रजातन्त्र ल्याउन कति संघर्ष गरे ? कसरी संगठन गरे ? कति सुविधा उपभोग गरे ?
यो यात्राका क्रममा पुराना अनुभव सुन्ने र जान्ने अवसर पाइयो । कुनै जमाना थियो, बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भटराई गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीजस्ता नेताहरु जिल्ला दौडाहा गर्थे । महिनौंसम्म प्रशिक्षण चल्थ्यो ।
त्यसले नेता र कार्यकर्ता मात्र होइन, तिनका परिवारबीचको सम्बन्ध पनि कसिलो हुनेगर्थ्यो । यस प्रसंगमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले लेखकलाई सुनाएका छन्- नेताहरुबीच जहाजमा उड्ने, होटेलमा बस्ने र फर्किने संस्कार विकास हुँदा नेता र जनता टाढिएका छन् । नेताले देश र भूगोल बुझ्न सकिरहेका छैनन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजनीतिमा परिरहेको छ । जातीय, क्षेत्रीय भावना बढ्नुमा अदूरदर्शी नेतृत्व जिम्मेवार छ ।
सुर्खेत रोड नेपालगन्जस्थित नेपाली कांग्रेस बर्दियाका पूर्वसभापति ज्ञानराज शर्माको निवासले कुनै समय बीपी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत धेरै नेतालाई आश्रय दियो ।
शर्मा पत्नी सुशीलाले सुनाइन्- जनमत संग्रहमा बहुदल हारेपछिको कुरा हो । सान्दाइ (बीपी) आउनुभएको थियो । नेता आउने भएपछि कार्यकर्ताको भिड हुने नै भयो । म आफैँ खाना बनाउन व्यस्त थिए । नेपालगन्जमा हिजोआजजस्तो होटेल थिएनन् नत जहाजको सहज सुविधा नै । नेताहरु महिनौं घरमा बस्थे । संगठन गरेर फर्किन्थे । अहिले त सुन्दै छु नेता आउन पाएकै छैनन् । गैहाले भन्छन् ।
त्यही घरसँगको अर्को घटना पनि छ । विसं २०४२ को सत्याग्रह ताकाको कुरा हो । कांग्रेसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला केही दिन बसेर फर्किए । सुशीलाले सम्झिइन् अझै धेरै नेता र कार्यकर्ता हाम्रो घरमा छँदै थिए । म खाना बनाउन व्यस्त थिए । खुवाउन नपाउँदै प्रहरी आइहाल्यो । एक एक गरेर सबैलाई समायो । खाने कोही बचेनन् । सबै खेर गयो । आजभोलि त नेताहरु कार्यकर्ताका घरमा बस्ने र खाने चलन हराइसक्यो भन्ने सुन्छु ।
२०५४ अघि कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ता एकदमै सामान्य जीवन बिताउँथे । आज त उनीहरु जति विलासी अरू कमै होलान् ! कम्युनिस्ट राजनीति गर्ने मेरा एक मित्रले सुनाए- हामी चिउरा र गुण खाएर दिनभर पार्टीको काममा खटिन्थ्यौं । यस सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपालको भनाइ प्रसिद्ध छ- चुनाव प्रचारमा हिँड्दा हाम्रा कार्यकर्तालाई चिउरा-पानी भए पुग्ने । कांग्रेसीलाई बियर र मासु नभई नहुने ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीका तर्फबाट ठाकुरबाबा नगरपालिकामा मेयरका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका मेरा मित्र रामबहादुर शाहीले सुनाए- धन नहुनेले अब राजनीतिमा नलागे हुने भयो । कांग्रेस, नेकपा र अरु धेरै पार्टीका सिद्धान्त फरकफरक भए पनि तिनका नेता र कार्यकर्ताको व्यवहार र संस्कारमा खासै अन्तर छैन । दलहरु विभिन्न नाममा खोलिएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीजस्तै भएका छन् भने नेता जति म्यानेजर । प्रायः सबैको एउटै लक्ष्य देखिन्छ- कमाउने अझ बढी कमाउने ! बस् कमाउने ।